R/W ABIY AHMED oo war isbeddel ah kasoo saaray dagaalka gobolka Tigray-ga | Warkii.com
Home warkii R/W ABIY AHMED oo war isbeddel ah kasoo saaray dagaalka gobolka Tigray-ga
R/W ABIY AHMED oo war isbeddel ah kasoo saaray dagaalka gobolka Tigray-ga
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta isku dayey inuu hoos u dhigo cabsida laga qabo dagaal lagu hoobto oo ka dhaca gobolka Tigray ee dalkaas, oo ciidamada militariga ay howlgal ka billaabeen.
Hadalladiisa ayaa yimid kadib markii militariga ay shalay ku dhowaaqeen inay dagaal kula jiraan xisbiga TPLF ee hoggaamiya gobolka Tigray-ga kadib bilo ay xiisad u dhaxeysay gobolkaas iyo dowladda federaalka.
Abiy ayaa u muuqda inuu hoos u dhigayo xiisadda, xilli ay sii kordhayaan baaqyada beesha caalamka ee ku aadan wada-hadallo dhex-mara labada dhinac.
Waxa uu yiri “dowladda waxay muddo bilo ah si dulqaad leh isugu dayeysay inay si nabdoon u xalliso khilaafka kala dhaxeeya gobolka Tigray, waxaan isku daynay dhex-dhexaadin, dib u heshiisiin iyo wada-xaajood.”
“Dhammaan waa ay guul-darreysteen sababtoo ah isla weynida iyo madax adeegga TPLF. Tii ugu dambeysay waxay dhacday markii TPLF ay weerareen Taliska Waqooyi ee fadhiggiisu yahay Tigray,” ayuu yiri.
Previous articleJoe Biden oo la wareegay hoggaanka tirinta codadka gobolka Pennsylvania
Next articleQoor Qoor oo magacaabay guddiga doorashada Galmudug (Aqriso Magacyada)
Guddoomiyaha degmada Hodan oo qarax lala eegtay caawa iyo wararkii ugu...